Motorola One Macro - ဒီဇိုင်း၊ အင်္ဂါရပ်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ဖြန့်ချိမည့်ရက်။ | Androidsis
Motorola One Macro ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်း၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့်ဖြန့်ချိမည့်နေ့ရက်?
အမေရိကန်ထုတ်လုပ်သူကရပ်မနေပါဘူး မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းပြောပြပါ စပိန်နိုင်ငံရှိ Motorola One Zoom ကိုရောက်ရှိခြင်း, အလယ်အလတ်အကွာအဝေးအထိရပ်တည်ရန်ငါတို့နိုင်ငံသို့ဆင်းသက်သောကုမ္ပဏီ၏မော်ဒယ်အသစ်။ မလုံလောက်ဘူးလား ကောင်းပြီ၊ သိပ်မကြာခင်မှာပဲသူတို့ကဖုန်းအသစ်တစ်ခုကိုထုတ်တော့မည် Motorola One Macro.
ဒါဟာပထမဦးဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါ ငါတို့သည်ဤကိရိယာအကြောင်းပြောဆိုပါ, တစ် ဦး လက်မှတ်မှတဆင့်ကျနော်တို့က၎င်း၏တည်ရှိမှုကိုအတည်ပြု။ ယခုတွင်မူကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏ဒီဇိုင်း၊ နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနေ့စွဲကိုအတည်ပြုနိုင်သည်။ Motorola One Macro ဟာထောင့်လေးထောင့်နားမှာရှိနေပါတယ်။
ဒီဇိုင်းနှင့် Motorola One Macro ၏အင်္ဂါရပ်များ
Motorola နှင့်အလွန်နီးစပ်သောသတင်းရပ်ကွက်တစ်ခု၏အဆိုအရ၎င်း၏ One Macro အသစ်ကိုလာမည့်အပတ်တွင်အိန္ဒိယ၌တရားဝင်ပြသလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ထုတ်လုပ်သူများကများသောအားဖြင့်ကြာသပတေးနေ့တွင်သူတို့၏ဖုန်းများကိုတင်ပြလေ့ရှိခြင်းကြောင့်အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်သည်သတ်မှတ်ထားသောနေ့ရက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
လက်တင်အမေရိကနဲ့ဥရောပကိုခုန်ဆင်းဖို့အိန္ဒိယမှာစတင်မယ့်အလယ်အလတ်တန်းစားပုံစံအကြောင်းပြောနေတာပါ။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့်စပ်လျဉ်း။ Motorola One Macro ကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်ရွေးချယ်ထားသောပရိုဆက်ဆာသည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် MediaTek မှ Helio P602 GB မှ3GB RAM နှင့် 32GB Internal Storage ပါရှိပါသည်။
ပြီးတော့ဒီကိရိယာလက်ခံရရှိတဲ့နာမည်ဟာသူ့ရဲ့ဓါတ်ပုံဆိုင်ရာအပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာမှကြောင့် Macro ကင်မရာတစ်ခု ၎င်းတွင်ပထမ ဦး ဆုံး 13-megapixel ကင်မရာ၊ 2-megapixel depth sensor နှင့်တတိယ 2-megapixel အာရုံခံကိရိယာတို့ပါဝင်ပြီး၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်သောအရာဝတ္ထုများကိုဖမ်းယူနိုင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီ model မှာ ၆ လက်မအရွယ် screen နဲ့ notch ပါ ၀ င်ပြီးဈေးနှုန်းကတော့ယူရို ၂၄၀ လောက်ရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကော Motorola One Macro?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Motorola One Macro ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်း၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့်ဖြန့်ချိမည့်နေ့ရက်?
Samsung Galaxy Note 10 ၏ S Pen ခလုတ်ကိုပြန်လည် remap လုပ်နည်း
Android 10 မှာစမတ်အကြံပြုချက်ဒေတာကိုရှင်းလင်းနည်း